तपाईंको वेबसाइटको उपस्थिति सुधार गर्न १० नि: शुल्क वर्डप्रेस प्लगइनहरू क्रिएटिव अनलाइन
तपाईको वेबसाइटको उपस्थिति सुधार गर्न १० नि: शुल्क वर्डप्रेस प्लगइनहरू
WordPress प्लगइनहरू सही तरिका हुनसक्दछन् हाम्रो वेबसाइटको आवश्यकताहरू पूरा गर्दा समय बचत गर्नुहोस्। सत्य यो हो कि त्यहाँ असंख्य छन् र हामी कल्पना गर्न सक्ने कुनै पनि प्रकार्यका लागि सामानहरू भेट्टाउन सक्छौं। यस चयनमा मैले वेबसाइटहरूको विशाल बहुमतका लागि उपयोगी हुने उपकरणहरूको सेट स gather्कलन गर्ने प्रयास गरें।
तिनीहरू सबै स्वतन्त्र छन् र पर्याप्त प्रभावकारी परिणामहरू प्रस्ताव गर्दछ। के तपाईलाई अरु थाहा छ? हामीलाई टिप्पणी दिनुहोस् र मलाई भन्नुहोस्!
मैन्युअल छवि क्रप
केहि अवसरहरूमा तपाईले निश्चित रूपमा आफ्नो छविहरूलाई विशेष कटौती गर्न आवश्यक पर्दछ। यो प्लगइनको साथ, क्रपिंग छविहरू एक धेरै सहज र म्यानुअल कार्य हुनेछ। तपाईं मल्टिमेडिया लाइब्रेरीबाट क्रप गर्न चाहेको फोटो चयन गरेर, तपाईं आफ्नो छविहरू रेकर्ड समयमा पुनःआकार गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ फोटो र नक्कलहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। प्लगइन डाउनलोड गर्नुहोस् तलका लिंकमा।
स्वच्छ र सन्तुलित साइट उत्पादन गर्नका लागि उचित तरीकाले हाम्रो वेबसाइटको सामग्रीलाई क्रमबद्ध र प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र ईन्ट्र्याक्टिव र प्रयोग गर्न सजिलो मेनू सिर्जना गर्न सुसज्जित छ। तपाईं यो पाउन सक्नुहुन्छ निम्न लिंकमा,
यस प्लगइनको माध्यमबाट यो तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट मा गतिशील प्रस्तुतिहरू विकास गर्न र कार्यान्वयन गर्न को लागी एकदम सजिलो हुनेछ। एक सहज तरीकामा, तपाईं भिडियो, छवि वा पाठ समावेश स्लाइडहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लेन्स प्रणाली मार्फत तपाईं आफ्नो विषयवस्तुमा तपाईंको सामग्री प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। योसँग सशुल्क संस्करण पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग एउटा उत्तरदायी विषयवस्तु छैन वा तपाईं आफ्नो साइट प्रदर्शित भएको समर्थनमा निर्भर गर्दै विभिन्न उपस्थिति सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो प्लगइन एकदम उपयोगी हुनेछ। यसको बहु कार्यहरूले तपाईंलाई तपाईंको साइटको ग्लोबल र अनौंठो दृष्टि सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। परिणाम एक पृष्ठ हो जुन सजीलो पहुँचयोग्य र कुनै पनि प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न योग्य छ, जुन कहिल्यै चोट गर्दैन र तपाईंको प्रोजेक्टमा थप गरिएको मान हो। तपाईं यसलाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ।
यो वर्डप्रेस प्लगइन बराबर उत्कृष्टता हो। तपाईंको ब्लगलाई सामाजिक नेटवर्कहरूसँग लिinking्क गर्न र बिभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नका लागि उत्तम। योसँग सुविधाहरू र कन्फिगरेसन विकल्पहरूको एक विस्तृत विविधता छ। यसमा तथ्या ,्कहरू, ईमेल मार्फत सदस्यता प्रणाली, छवि ग्यालरीहरू सिर्जना गर्ने प्रणाली र अन्य धेरै चीजहरूको बीचमा हिज्जे परीक्षक समावेश गर्दछ। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्।
यदि हामी कार्यहरू वा ग्राफिक कार्यहरूको प्रदर्शनी विकास गर्दैछौं भने यो प्लगइन आवश्यक हुन सक्दछ। यसको धेरै कार्यहरू मध्ये हामीले हाम्रो छविहरूमा वाटरमार्क थप्न, स्लाइड शो विकास गर्ने वा खुलासा गरिएका सामग्री वर्गीकरण गर्न एल्बमहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना फेला पार्दछौं। योसँग प्रीमियम संस्करण र नि: शुल्क संस्करण दुबै छ। यस लि from्कबाट यसलाई समात्नुहोस्।
mb.YTPlayer पृष्ठभूमि भिडियो
हामीले विकास गरिरहेका प्रोजेक्टको प्रकार र यसको मागहरूको आधारमा, हामी उच्च गुणको भिडियोको साथ गतिशील पृष्ठभूमि सिर्जना गर्न छनौट गर्न सक्दछौं। अपरेशन अत्यन्त सरल छ किनकि हामीसँग हाम्रो पृष्ठमा देखा पर्नको लागि YouTube मा होस्ट गरिएको भिडियो ठेगाना मात्र आवश्यक हुन्छ। यसले हामीलाई बहु कार्यहरू प्रदान गर्दछ। हामी यो निर्धारण गर्न सक्दछौं कि हाम्रो भिडियो स्थायी रूपमा लुपको रूपमा देखा पर्दछ, आवाजको साथ वा आवाज बिना वा यो पनि प्ले गर्न हामी कुन मिनेट पोइन्टबाट निर्दिष्ट गर्न सक्छौं। यो सिफारिश गरिएको छ कि यदि हामी यो विकल्प छनौट गर्छौं भने एकसमान सतहहरू सहित एक साधारण भिडियो छनौट गर्छौं र पाठ्यक्रमको अधिक डिग्री पाउन हामी हाम्रो पृष्ठको डिजाइनमा ध्यान दिन्छौं। यो बेकार हुनेछ यदि हामी महान सौंदर्यशास्त्रको साथ वेबसाइट विकसित गर्छौं तर यसलाई पहुँच गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै पहुँचयोग्य र बुझ्ने छैन। यो पनि याद राख्नुहोस् कि यी प्रकारका उपकरणहरू प्राय: संस्थागत-प्रकारका पृष्ठहरू र प्रोजेक्टहरूको लागि अधिक प्रभावकारी हुन्छन् जसमा आगन्तुकहरूको बढि बढाइएको आवाज छैन। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्।
HTML5 jQuery अडियो प्लेयर
यस उपकरणलाई धन्यवाद, तपाइँको वेबसाइटमा एक खेलाडी परिचय धेरै सजिलो हुनेछ। जहाँ सम्म एक प्रो संस्करण छ, यसको नि: शुल्क संस्करणमा यसले ठूलो स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई धेरै गीतहरू वा एकल थीमको प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, कुनै पनि ब्राउजरसँग उपयुक्त।यहाँ फेला पार्नुहोस्।
के तपाइँ पोर्टल विकास गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ फरक प्रयोगकर्ताहरू बीच प्रतिक्रिया र सहकार्य प्रबल हुन्छ? के तपाइँ तपाइँको समुदायलाई कायम राख्न चाहानुहुन्छ र तपाइँको साइट र सहभागीहरूलाई आपसमा जोड्ने नेटवर्कहरू र सम्बन्धहरूको प्रणाली चाहिन्छ? BuddyPress संग तपाईं एक धेरै सजिलो तरिका मा एक सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म परिचय गर्न सक्नुहुन्छ। यसका सामर्थ्यहरूमा प्रयोगकर्ता सूचि दर्ता गर्ने र सिर्जना गर्ने क्षमता, प्रयोगकर्ताहरू बीच एक सन्देश प्रणाली, आम रुचिहरूको समूहको सिर्जना र तपाईंको आफ्नै फोरमहरू होस्ट गर्न उपकरणहरू र तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई च्याट र बैठक साइट प्रस्ताव गर्न समावेश गर्दछ। यसले विभिन्न प्रकारका कागजातहरू अपलोड गर्ने सम्भावना र समुदाय बनाउने सदस्यहरूका वेबसाइटहरू पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्।
त्यहाँ Vimeo नेटवर्क को धेरै प्रयोगकर्ता छन् र Vimeo भिडियो सामग्री को लागी एक ठाउँ वा ग्यालरी हुनु एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। हामी सबै भन्दा राम्रो भिडियो प्लगइनको बारेमा कुरा गर्न सक्दछौं, जबकि यसको मात्र कमजोर पोइन्ट यो हो कि यो यूट्यूबसँग उपयुक्त छैन। यसले तपाईंको भिडियो ग्यालरी व्यवस्थित गर्न र निर्माण गर्न धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र पूर्ण रूपमा नि: शुल्क। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » WordPress » तपाईको वेबसाइटको उपस्थिति सुधार गर्न १० नि: शुल्क वर्डप्रेस प्लगइनहरू
डिजाइनरहरूको लागि +20 निःशुल्क वसन्त संसाधन